व्याज अनुदानमा महिला उद्यमशीलता कर्जा लिन केके चाहिन्छ योग्यता ? ~ Banking Khabar
व्याज अनुदानमा महिला उद्यमशीलता कर्जा लिन केके चाहिन्छ योग्यता ?
बैंकिङ खबर । बैंकबाट व्याज अनुदानमा १५ लाख रुपैयाँसम्म महिला उद्यमशीलता कर्जा पाइन्छ । बढीमा पाँच वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी यस्तो कर्जा पाइन्छ । यस्तो कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्वन्धित बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूले तोक्न सक्नेछन् । कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।